भरतपुर–१९ को पुनः मतदानमा कसले मार्ला बाजी ? - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
२० श्रावण २०७४, शुक्रबार १२:४८ August 4, 2017 Nonstop Khabar
चितवन, २० साउन । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा आज पुनः मतदान शुरु भएको छ । बिहान ७ बजेपछि सो वडाका तीन मतदानस्थलका ६ वटा मतदान केन्द्रमा मतदान शुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले बताए । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि भरतपुर १९ मा पुन मतदान भएको हो । यही वडाको यो मतदानले भरतपुर महानगरमा मुख्यतः दुई प्रतिस्पर्धीको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
मतदानका लागि मतदान अधिकृतसहित ३६ जना कर्मचारी खटिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । बिहीबारदेखि नै सो वडामा बर्सात भइरहेको छ । बर्सात र हिलो भएपछि मतदाता आउन ढिलाइ गरेको जीवनज्योति स्कुल, गुञ्जनगरमा रहनुभएका तत्कालीन गुञ्जनगर गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्ष विष्णु ढकालले बताए ।
यद्यपि, मतदाता आउने क्रम ७ बजेपछि बढेको उनले बताए । राष्ट्रियरूपमा चर्चामा रहेको यस वडामा निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । एउटा वडामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाका अनुसार नेपाल प्रहरीका ४६१ र सशस्त्र प्रहरीका २९५ जना परिचालन गरिएको छ । बाहिरी घेरामा नेपाली सेना र भित्री घेरामा राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी परिचालन गरिएका छन् ।
गए राति १२ बजेदेखि सो वडामा प्रवेश गर्ने नाकाहरू बन्द गराइएको थापाले बताए । थापाका अनुसार तीनवटा मतदानस्थलमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रत्येकमा ३५ जनाको टोली परिचालन गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षककै नेतृत्वमा तीनवटा मोबाइल टोली पनि परिचालन गरिएको छ भने प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा तीनवटा स्ट्राइकिङ टोली परिचालन गरिएका छन् । थप सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी तैनाथीमा राखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जिल्ला पूरै हेर्न सक्ने सुरक्षा जनशक्ति एउटा वडामा परिचालन गरिएकाले कुनै समस्या नहुने बताए । निर्वाचनको अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरे बिहीबार नै यहाँ आइपुगेको भट्टले बताए ।
भरतपुरका २७ वटा वडाको अन्तिम परिणामअनुसार नेकपा (एमाले)का नगर प्रमुखका उम्मेदवार देवीप्रसाद ज्ञवालीले ४० हजार ९८० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) – नेपाली काँग्रेस गठबन्धनकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले ४० हजार १९४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसअघि वडा नं. १९ मा दुई हजार ८९७ मत खसेको थियो । वडा नं १९ मा तीन हजार ८९७ मतदाता छन् । महानगरको वडा नम्वर २० को तीन हजार ३०२ मत पनि गणना गर्न बाँकी रहेको छ ।
काठमाडौंको तीनकुनेमा डेढ करोड सिध्याएर बनाइयो धुलाम्य पार्क
वन कार्यालयमा आगजनी । कर्मचारी बाँधेर लडाइए
जनयुद्धकालिन माओवादी पार्टीले बनायो ७ सदस्यीय हेडक्वाटर (नामसहित)
चिउरीखोला दोभानमा थुनिएका २७ को उद्धार । रामपुर-उदयपुर बस्ती पूरै डुबानमा